एमसीसी पास गराउन ‘नयाँ चाल’ – Namaste Dainik
एमसीसी पास गराउन ‘नयाँ चाल’
May 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on एमसीसी पास गराउन ‘नयाँ चाल’
काठमाण्डौ । सरकारले अमेरिकी सहयोग सम्वन्धि विवादास्पद कार्यक्रम ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन’संसदबाट पास गराउनको लागि सरकारले‘नयाँ चाल’चलेको छ । पार्टी भित्र विवाद चर्कने देखेपछि त्यसलाई मथ्थर पार्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकटका प्रभावशाली नेताहरुले सांसदहरुलाई अलग अलग भेटेर ‘कन्भिन्स’ गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी निकटका प्रभावशाली नेताहरु विष्णु पौडेल,सुवास नेम्वाङ,प्रदिप ज्ञवाली,शंकर पोख्रेल लगायतका नेताहरुले खास गरि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका नेताहरुलाई अलग्गै भेटेर छलफलहरु गर्ने गरिरहेको सम्वद्ध नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा ओली स्वंयले पनि दैनिक जसो ८,१० जना नेताहरुलाई सामुहिक र अलग अलग रुपमा भेटिरहेका छन् । त्यस्तै अन्य नेताहरुले पनि सांसदहरुसंग व्यक्तिगत रुपमा भेटघाट र टेलिफोन सम्पर्क गरेर छलफल गर्ने गरेका छन् । शुरुवातमा सरकार र पार्टीको विषयमा छलफल गर्ने र छलफलको अन्त्यमा एमसिसिको महत्व बुझाउंदै पास गर्न सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्ने गरेको एक नेताले जनतापाटीसंग बताए ।‘प्रधानमन्त्री वा प्रभावशाली नेताहरुले पार्टी वा सरकार संचालनको बारेमा छलफल गर्नुलाई अन्यथा मान्ने कुरा भएन । अझ तपाईले सुझाव कार्यान्वयन गरिन्छ भनेपछि त उत्साहित हुने कुरा नै भयो । त्यसमाथि बजेटमा राख्ने कार्यक्रमको बारेमा पनि सल्लाह गरेपछि हामीलाई पनि १,२ वटा कार्यक्रम पार्ने लोभ भैहाल्छ’ती नेताले भने—अन्तिममा चांही ल एमसिसि पास गर्न सहयोग गर्नु पर्यो,विवाद गरिदिनु भएन । तपाईले सहयोग गर्नु भयो भने अरु सबै ठिक भैसकेको छ भनेपछि के भन्नु ?
नेताहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेकपामा एमसिसिको विरोधमा बोल्नेहरुको संख्या घट्दै जानुको पनि मुख्य कारण ओली पक्षधर नेताहरुको त्यही अभियान हो । विगतमा निकै चर्काे स्वरमा विरोध हुदैं आएकोमा पछिल्लो समय देव गुरुङदेखि जनार्दन शर्मासम्मका नेताहरु पनि एमसिसि प्रति नरम हुदैं गएका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ त लगभग मौन जस्तै छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा भएका छलफलमा भीम रावल वाहेकका अन्य नेताहरुले एमसिसिको बारेमा सरकारको बारेमा खासै कडा टिप्पणी गरेनन् । बरु विरोध पनि नगर्ने,समर्थनमा पनि नबोल्ने नीति धेरै नेताहरुले लिंदै गएको देखिएको छ।
‘यसमा भित्र भित्र प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि सहमती जनाई सकेको देखिन्छ । त्यसैले जसरी पनि पास भैहाल्छ, हामी मात्रै उफ्रिएर केही हुने होइन । नेताहरुको विरोध गरेर आफू मात्रै किन तारो बन्ने भन्ने धेरैको सोंचाइ बन्दै गएको देखिन्छ’नाम उल्लेख गर्न नचाहाने एक नेताले भने। प्रचण्डलाई एकलौटी अध्यक्ष चलाउने लोभ छ,माधव नेपाललाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने लोभ छ,झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति हुने लोभ छ,युवा नेताहरुले मन्त्रीमा टिक्ने र मन्त्री बन्ने तथा पार्टीमा प्रभाव जमाउने लोभ छ । वामदेवको झन् के कुरा गर्नु ? र,ओलीको समर्थन नभई कसैले पनि आफूले चाहेका पदमा टिक्न वा पद पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वांस छैन। त्यसैले अहिले नेकपाका नेताहरु एमसीसीको विरोध गरेर ओलीको तारो बन्नु भन्दा मौन बस्नु भन्ने ठीक भन्ने ठानेको देखिन्छ । सांसदहरुलाई एकपक्षमा ल्याएपछि भीम रावलसंग भने प्रधानमन्त्री स्वंयले अन्त्यमा वार्ता गर्ने र सहमत नभए उनलाई वेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा ओली निकटका नेताहरु पुगेका छन् । रावलले सचिवालयमा नपरेको र मन्त्री हुन नपाएको रिसमात्रै पोखिरहेको विश्लेषण उनीहरुको छ। सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा ओलीले रावललाई भन्दा पनि लेखराज भट्टलाई बढी महत्व दिन थाल्नुलाई पनि ओलीको रणनीति बुझ्न सकिने नेताहरुको विश्लेषण छ ।
त्यहीकारण एमसीसीले विगतमा नेकपामा जुन खालको विवाद देखिएको थियो,अहिले निकै कमी आइसकेको छ । कतिपयले त एमसिसिकै कारण पार्टी विभाजन हुने भविश्यवाणीसमेत गर्न थालिसकेका थिए । तर,पछिल्लो समयमा एमसीसीको पक्षमा जुन ढंगले माहौल बन्दै गएको देखिएको छ,त्यसले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै असर पार्ने देखिदैन ।
तर,प्रधानमन्त्री र उनी निकटका नेताहरुले अहिले जसरी एमसीसी पास गराउनको लागि सुनियोजित रुपमा काम गरिरहेका छन्,यस्तो व्यापक तयारी अरु कुनै निर्णयको बेला पनि देखिदैन । त्यसले गर्दा एमसिसिमा त्यस्तो के छ,जस्लाई ओली र उनी निकटका नेताहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर जसरी पनि यही अधिवेशनबाट पारित नगराई नछोड्ने रणनीति लिएका छन् ? यसबारेमा भने नेकपाकै ठूला नेताहरुले पनि स्पष्ट जवाफ पाउन सकेका छैनन्
सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै ,प्रतिनिधिसभा बैठकमा मागियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा